Fanakalozana vaovao mahomby amin'ny fomba fijerin'ny mpanamarina ny hetra 26 hatramin'ny 28 Oktobra 2021 IBIS Hotel, Direction Générale des Impôts
Lisitr'ireo mpandoa hetra
Foibem-pitantanana Ankapoben'ny Hetra
Mpiasa ny DGI
Fifandraisana any ivelany
Recueil des textes Législatifs et Règlementaires
Dikan-teny teknika ny hetra
Fanabeazana ny Hetra
Ny vaovao farany rehetra
Fanakalozana vaovao mahomby amin'ny fomba fijerin'ny mpanamarina ny hetra 26 hatramin'ny 28 Oktobra 2021 IBIS Hotel
SEMINERA: Forum maneran-tany momba ny mangarahara sy ny fifanakalozam-baovao ho an'ny tanjona hetra
Fanakalozana vaovao mahomby
amin'ny fomba fijerin'ny mpanamarina ny hetra
26 hatramin'ny 28 Oktobra 2021
Mandray ny seminera Global Forum momba ny mangarahara sy ny fifanakalozam-baovao ho an’ny hetra i Madagasikara ny 26 ka hatramin’ny 28 oktobra 2021 ao amin’ny Hotel IBIS Ankorondrano.
Ity fiofanana ity dia miompana amin’ny fifandraisana misy eo amin’ny fanadihadiana momba ny hetra nasionaly, ny rafitra fanangonam-baovao sy ny fifanakalozana vaovao (RE). Ny mpandray anjara dia ampahafantarina ny foto-kevitra fototra momba ny mangarahara sy ny RE mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena, indrindra ny Exchange of Information on Request (DRE). Amin'ny alalan'ny andiana famelabelarana sy quizzes, ireo mpandray anjara dia ho zatra amin'ny fampiasana ny tambajotra sy ny rafitra fifanakalozam-baovao mba hanatsarana ny kalitaon'ny fanaraha-maso hetra sy hiadiana amin'ny fandosirana hetra. Entanina ireo mpandray anjara mba hampiasa tsara ireo fitaovana EOI ireo amin'ny fampitomboana ny isa sy ny kalitaon'ny fangatahana mivoaka amin'ireo mpiara-miombon'antoka mahazatra.
Ny seminera dia hanamafy ny fahatsiarovan'ireo mpandray anjara fa ny fiarovana ny fidiram-bolam-pirenena dia mifandray akaiky amin'ny fampiasana mahomby ity tambajotra EOI ity.
Mifototra amin’ny fitaovana fanofanana nomanin’ny Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, ity atrikasa ity dia namboarina hampiasain’ny Tale Jeneralin’ny Hetra eto Madagasikara.
Ny seminera dia mikendry ireo mpanara-maso ny hetra nasionaly, mpanao fanadihadiana momba ny hetra, ireo tompon'andraikitra amin'ny fanofanana ny mpanamarina ny hetra ao amin'ny RE sy ireo hafa mandray anjara amin'ny fifanakalozana vaovao ho an'ny tanjona hetra.
Tombam-bidy: trano, tany
PORTAL de l'administration
Firaiketana ireo Lalàna fifampifehezana
Foibem-pitantanana regionaly ny hetra
Momba ny DGI Tantara fohy Taona 1975 ka hatramin'ny 1997. Ny foibem-pitatanana momba ny hetra sy ny Foibem-pitatanana ny fadintseranana dia notantanin’ny Foibem-pitatanana ankapobe iray natao hoe « Foibem-pitantanana ankapoben’ny Fitondran-draharaha ara-bola » (DGRF). Ny foibem-pitantanana miandraikitra ny hetra dia nizara sampan-draharaha telo saiky miavaka tsara : sampan-draharahan’ny hetra mivantana , sampan-draharahan’ny hetra tsy mivantana sy ny sampan-draharahan’ny fanoratana sy ny hajia . Tamin’ny taona 1998,dia nitsangana ny Foibempitantanana ankapobe momba ny hetra ( DGI ) ary tafaray ny...
Foibem-pitantanana ankapoben'ny hetra - Tranoben'ny Ministera misahana ny toe-bola sy ny teti-bola Antaninarenina Antananarivo 101 - BP 863.
Telefaonina: 22 335 50 / 22 287 08 - Mailaka: dgimpots@moov.mg
Copyright © 2008 - 2021 DGI www.impots.mg . Alàlana voafetra.
Ampidiro ny adiresy mailaka anao